IBC 2019 တွင်ဗွီဒီယို streaming ၏အနာဂတ်ကို Bitmovin ကပြသသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Bitmovin IBC 2019 ဗီဒီယို streaming များ၏အနာဂတ်တင်ဆက်ပေးတယ်
အမ်စတာဒမ် - 30 ဇူလိုင်လ 2019 -Bitmovin, ဆန်းသစ် cloud-based ကိုဗီဒီယို streaming များဖြေရှင်းချက်ထဲမှာကမ္ဘာကြီးခေါင်းဆောင်ကကစားရန် developer များဖွင့်သည်ကိုမည်သို့ IBC ပြရန် 2019 (Hall14.E12) မှာထုတ်ဖေါ်အန်ကုက်လုပ်ပါနဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆို, ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေး, ချောမွေ့စွာသောဗီဒီယိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါလိမ့်မယ်။ ဧည့်သည်များအစွန်ဖျော်ဖြေရေးအတွေ့အကြုံများ Bitmovin ထုတ်ကုန်ကို အသုံးပြု. ပရိတ်သတ်များမှကယ်နှုတ်ရနိုင်ပုံကိုဖြတ်တောက်ခြင်းဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဒါဇင်အသစ်သောဆန္ဒပြပွဲများကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်:
encoding: Bitmovin ဗီဒီယို Encoding ပိုမြန် Real-time ထက် MPEG-Dash နှင့် HLS ဖွ 100x ဗီဒီယိုများအတွက် processing, တိုင်းကိရိယာအရည်အသွေးမြင့်စီးကယ်တင်တတ်၏။ Per-ခေါင်းစဉ် Encoding နှင့် Multi-codec ကို streaming များထောက်ပံ့အပါအဝင်ကွန်တိန်နာ-based ဗိသုကာခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့မီဒီယာကုမ္ပဏီအကြားမှာရှိတဲ့မဆိုမျိုးစပ်ပေါင်းစပ်ဖို့, ရန်အပြည့်အဝ On-ရဝုဏ်, အပြည့်အဝကိုမိုဃ်းတိမ်ကနေပတ်ဝန်းကျင်မှာအမျိုးမျိုးဖြတ်ပြီးသည်ခေတ်သစ် virtualized encoding ကဆာဗာများချထားပြီးနိုင်ပါတယ်။
ကစားသူ: အဆိုပါ Bitmovin Player ကိုနေရာတိုင်းအရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယိုကယ်တင်တတ်၏။ အဆိုပါပြောင်းလဲနေသောဖြေရှင်းချက်လိပ်စာများ device ကိုလိုက်ဖက်မှု, ပလက်ဖောင်းနောက်ဆုံးသတင်းများအသစ် streaming များကို formats / ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများ, content တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ကြော်ငြာထောက်ခံမှု - ငွေရှာခြင်းအတွက်မဟာဗျူဟာတစ်ခုအကွာအဝေးကိုထောက်ပံ့သောအဆင့်မြင့်, ထူးခြားအတွေ့အကြုံများကယ်လွှတ်ခြင်းငှါဝန်ဆောင်မှုပေးဖွင့်။
Analytics မှ: Bitmovin Analytics မှမဟာဗျူဟာမြောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလုပ်ပိုင်ခွင့်ဗီဒီယိုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပရိသတ်ကိုအပြုအမူသို့ Real-time ထိုးထွင်းသိမြင်ကယ်တင်တတ်၏။ ဝန်ဆောင်မှုပေးနဲ့ content ပိုင်ရှင်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှကြည့်ရှုအတွေ့အကြုံကိုကယ်နှုတ်ချိန်ညှိပြန်ဖွင်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှတဆင့်အန်ကုဒ်ကနေအဆုံးမှအဆုံးသို့ကဗီဒီယိုစွမ်းဆောင်ရည်မက်ထရစ်ကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Bitmovin ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ IBC မှ၎င်း၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု, လက်-on ကိုဆော့ဖ်ဝဲရေးသင်ယူမှုဓာတ်ခွဲခန်းသို့ဆောင်ခဲ့ပါလိမ့်မည်။ သောကြာနေ့ 13 အပေါ်အရပျကိုယူပြီးthခန်းမ4တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံဇုန်အတွက်စက်တင်ဘာလ, အလေးနာရီအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များအပါအဝင်ကဗီဒီယို streaming များ Workflows တိုးမြှင့်များအတွက်အဆင့်မြင့်လက်တွေ့နည်းစနစ်နှင့်အတူတက်ရောက်ပေးလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့တက်ရောက်သူအတည်ပြုပေးရန်ကဒီမှာ sign up ကိုကျေးဇူးပြုပြီး ဒီမှာ or ဒီမှာ.
"ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေ ပို. ပို. အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်လာနေသည်နှင့်စစ်တိုက်ခြင်းငှါလိုင်းများအကြောင်းအရာန်းကျင်ရေးဆွဲခဲ့ကြစဉ်အောင်ပွဲခံပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်သောကုမ္ပဏီများ, အရည်အသွေးမြင့်ပေါင်းစုံမျက်နှာပြင်အတွေ့အကြုံများကိုကယ်နှုတ်တော်မူဖို့အမြန်ဆုံးသောသူများဖြစ်ကြ၏" Stefan Lederer, Bitmovin မှာ CEO ဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ "IBC မှလာရောက်လည်ပတ်သူများနောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများနှင့်အတူလက်ရနိုင်ပါလိမ့်ကျနော်တို့ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုအနာဂတ်မှာ powering နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေကိုမျှဝေပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ယူမှုဓာတ်ခွဲခန်းအစည်းအဝေးများ join ဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်။ "
Bitmovin လည်း On-ရပ်င်း၏ဗီဒီယိုကိုကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းပညာကိုမိတ်ဖက်ထံမှ streaming ဗီဒီယိုကိုတိုးမြှင့်များအတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့လမ်းညွှန် featuring တင်ပြချက်များ "ထ pop" အလုပ်ချိန်နာရီ၎င်း၏စီးရီး join ဖို့ IBC တက်ရောက်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့။
bitmovin ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor IBC ပြရန် 2019 စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် ဗီဒီယိုက streaming များ virtual reality 2019-07-30
ယခင်: Argosy IBC2019 မှာလူပျိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အရင်းအမြစ်အခြေအနေမျဉ်းတား
နောက်တစ်ခု: TSL ရဲ့နယူး SAM ကို-မေးပေး Audio စောင့်ကြည့်ပလက်ဖောင်းခေါင်းဆောင်များ BIRTV မှ